On1.click | ဝါယောင်းပြောက်လည်နီ
... ုးနွယ်ဝင်ငှက်ဖြစ်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ မြန်မာနို...
From Naina Devi Himalayan Bird Conservation Reserve, Uttarakhand, India
In Dehradun, India.
ဝါယောင်းပြောက်လည်နီ (Ianthocincla rufogularis) သည် စာကလေးမျိုးနွယ်ဝင်ငှက်ဖြစ်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဘူတန်နိုင်ငံ၊ တိဗက်နှင့် နီပေါနိုင်ငံတို့တွင် တွေ့ရှိရလေ့ရှိသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ယင်းငှက်ကို မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
↑ BirdLife International (2012). "Garrulax rufogularis". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN. old-form url